कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहद्वारा राजीनामा घोषणा « Jagaran News
कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहद्वारा राजीनामा घोषणा
Published On : 21 July, 2021 5:43 pm
काठमाडौं, साउन ६ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यतामा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै उनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्।
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै धनुषा, सर्लाही र बाराका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता केही दिनयता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना बसिरहेका छन्। सांसद सिंह पनि नेता–कार्यकर्तासँगै अनसनमा छन्।
उनले विहिबार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष राजीनामा बुझाउन लागेको बताए। ‘म आजै बालुवाटार पुगेर राजीनामा पत्र बुझाउने छु,’ उनले भने, ‘क्रियाशीलमा भएको धाँधलीका कारण म राजीनामा दिँदैछु।’
सर्लाहीका सबै क्षेत्रमा विधिविपरीत सदस्यता बाँडिएको उनको भनाइ रहेको छ । साथै कार्यकर्ताको माग पूरा गराउन आफूले राजीनामा दिन लागेको उनले बताए । केहि दिन अघि मात्रै एमालेका नेता भिम रावलले पनि सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनलाई राजीनामा फिर्ता लिन अहिले दबाब बढेको छ ।
माधव नेपाल पक्षले भन्यो–स्पष्टीकरणले एकतामा भाँजो हाल्यो, ओली समूहको गतिविधिप्रति खेद व्यक्त
काठमाडौं, साउन ६ । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षबाट
माओवादी स्थायी कमिटी बैठक: साझा कार्यक्रममार्फत सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय
काठमाडौं, साउन ६ । नेकपा माओवादीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन गठबन्धनबीच साझा नीति
कोरोनाबाट आज थप ३० को मृत्यु, २ हजार ८३८ जनामा संक्रमण पुष्टि, निको कति भए ?
काठमाडौं, साउन ६ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ८३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
क्षमता विस्तार गर्दै सविता कपडा उद्योग !
काठमाडौं । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकास्थित सिद्धीपुरमा संचालित सविता कपडा उद्योगले क्षमता विस्तार गरेको छ ।
काठमाडौं, साउन ६ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।